Firaisana tsikombakomba, fikambanan-jiolahy: zandary 10 voasambotra, naiditra am-ponja | NewsMada
Par Taratra sur 20/02/2019
”Tsy navotsotra, araka ny feo mandeha, ireo zandary voarohirohy tamin’ny fahafatesan’ny Mompera Nicolas sy ilay sinoa teny Mahitsy”. ”Zandary 10 no voasambotra sy efa naiditra am-ponja vonjimaika, tao anatin’ny roa herinandro, noho ny firaisana tsikombakomba amin’ny fikambanan-jiolahy”. Ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Ravalomanana Richard no nanambara izany, omaly.
« Miisa 10 sahady ireo zandary naiditra am-ponja vonjimaika tao anatin’ny roa herinandro izay noho ny firaisana tsikombakomba amin’ny fikambanan-jiolahy mitam-piadiana. Mahavariana ihany izany satria tao anatin’izay fotoana nandraisainay ny fitantanana izay dia izao sahady ny zava-misy. Manoloana ilay raharaha teny Mahitsy, mandray ny andraikitray izahay fa tsy votsotra izany, araka ny feo mandeha, akory ireo zandary tafiditra tamin’iny raharaha iny », hoy ny fanazavan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, omaly raha namaly ny ahiahin’ny olona momba ireto jiolahy tompon’antoka tamin’iny fanafihana nahafatesana olona roa (ilay metisy sinoa iray sy ny Mompera Nicolas) teny Mahitsy iny. Efa nampiaka-peo momba ity resaka tsy fandriampahalemana ity rahateo ny teo anivon’ny fiangonana Katolika tamin’ny alalan’ny Kardinaly sy ny Arseveka manoloana ity tifitra nahazo ny Mompera Nicolas teny Mahitsy ity. « Tahaka ny tany tsy misy fanjakana eto…Manameloka tanteraka izany ny eveka », hoy ny Kardinaly ary mbola nohamafisin’ny teo anivon’ny diosezin’Antananarivo aza izany fa hametraka fitoriana izy ireo.
Niaiky izy fa efa mihanaka manerana ny sehatra maro ny tsy fandriampahalemana fa tsy ny fiangonana ihany. Nahitsy hatrany ireto tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny finoana Katolika ireto fa maro amin’ny mpitandro filaminana no hitan’ny olona ary miray tsikombakomba amin’ny asan-jiolahy, indrindra amin’ny fampanofana ny basiny na fivarotana bala amin’izy ireo ka hahafahan’ireo dahalo mampihorohoro. Voamarina, araka izany, izao fa tena misy ny zandary miray tendro amin’ny asan-jiolahy mitam-piadiana ankoatra ireo mandray anjara mivantana sy miray tsikombakomba. Efa nilaza rahateo ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, ny herinandro teo fa hita tao amin’ilay « camera de surveillance » tao amin’ilay tranombarotra an’ilay metisy Sinoa niharan’ny fanafihana ny sarin’ireo zandary nivadika nanao asan-jiolahy. Nanamafy hatrany rahateo ireo tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa tsy natao ho fialokalofan’ny olon-dratsy ny zandarimaria fa ampiharina amin’izay mandika lalàna. Mitohy hatrany ny fanadiovana anatiny ao amin’ny zandarimariam-pirenena.